Similipal Bhitarkanika 4 Night / 5 Andro - Tours Luxury India - Tour Operator Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Local - side hita
100 in tahiry
Sokajy: Bhitarkanika tenifototra: Fepetra momba ny fianakaviana
TOUR COST: Per Personnes per Tour de base (Ao Rupees)
Ny sandan'ny ambiny ambany dia tsy manan-kery mandritra ny fe-potoana (Durga puja, taona vaovao & vanim-potoana Chistmass, fialan-tsasam-pirenena, vanim-potoana RathaYatra, vanim-potoana Holi)
Fitaterana araka ny fandaharana.
Ny saram-pisoratana rehetra, fiantohana sy fiaramanidina mpamily.
02-03 olona Dzire, 04 olona Etios.
06 persona Innova.
08-10 Olona Mpizaha-tany.
Roa alina amin'ny trano misy ny NON AC ao amin'ny Valan-javaboarin'i Bhitarkanika ao amin'ny tranombakoka Swish amin'ny sehatry ny fizarana miaraka amin'ny sakafo maraina, sakafo maraina sy sakafo maraina.
Alina roa alina AC Unterkunft AC Similipal Jungle mit Two - Lunch, Dinner & Breakfast.
Mandeha fiaramanidina ao amin'ny Bhitarkanika National Park.
Ao amin'ny Similipal National Park 01day feno ala safari nataon'i NON-AC Bolero.
Torolalana ho an'ny safira janga.
Taratasy ho an'ny INDIAN ho an'ny Parkam-pirenena.
Govt azo ampiasaina. Service Tax.
Fandaniana mifandraika amin'ny maha-izy azy manokana.
Izay rehetra tsy voalaza ao anatin'io fampidirana io.
DAY 01: FIANGONANA BHUBANESWAR - BHITARKANIKA
Rehefa tonga tao amin'ny Bhubaneswar Railway Station / Fandefasana amin'ny seranana mankany Bhitarkanika.Olona ny fitsidihana an'i Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri (Monastera bodista sy Stupas). Mankany amin'ny Toeram-ponenan'ny Sand Pebbles Jungle Resorts. Taorian'ny fialan-tsasatra fankafizana trano an-trano an-kalamanjana mankany KalibhanjaDiha any amin'ny sambo avy any ambanivohitra izay nankatoavin'ny Departemantan'ny Wildlife, dia afaka mankafy ny fahitana ny Ramsarsite.Evening ny afo ao an-toby miaraka amin'ny Snacks sy Dinner mihoatra ny alina ao amin'ny Sand Pebbles Jungle Resorts.
Taorian'ny fikarakarana trano fandroana tsara tarehy dia nitsidika ny "Sanctuary Bird", fitsangantsanganana ho an'ny tilikambo fitrandrahana ny King Ancient King ary nandeha sambo ho any amin'ny renirano isan-karazany teo amoron-tsambo izay nankatoavin'ny Departemantan'ny Wildlife, mba hahafantarana ny voay, fitsidihana ny Museum sy ny Tetikasa. Aorian'ny sakafo atoandro, ankafizo ny hakanton'ny natiora sy ny tavy. Amin'ny faran'ny tolakandro dia mitsidiha ny Tempolin'i Jagannath mba handray anjara amin'ny Live AalatiDarshan. Mandritra ny hariva dia mankafy ny afo miaraka amin'ny Snacks sy Dinner, mandritra ny alina amin'ny Sand Pebbles Jungle Resorts.
Taorian'ny fitsidihan'ny trano fidiovana tsara tarehy tao amin'ny Similipal Tiger Reserve. Hiditra ao an-hotely. Rehefa avy nandehandeha ny natiora ary ny fianarana momba ny natiora tao an-tanimbary, dia tsidiho ny Crocodile Breeding Farm. Mandritra ny alina sy ny alina ao Similipal.
Taorian'ny sakafo maraina dia mitsidika ny riandranon'i Barehipani sy Joranda ary Jungle Safari. Avy eo dia mitsidiha ny faritra Chahala. Mandritra ny alina sy ny alina ao Similipal.
DAY 05: FAHATSIAROVANA - FILAZANTSARAN'I BALASORE / BHUBANESWAR
Aorian'ny sakafo maraina, mitondra fiara mankany amin'ny seranam-piaramanidina Balasore / / Bhubaneswar mankany amin'ny dia lavitra.
"Farany ny tolotra"
Aoka ho voalohany haneho ny "Similipal Bhitarkanika 4 Night / 5 Days" hanafoana ny valin-
No of Days: 4 Night
₹26,998.00 Atao anaty harona
Tsy misy amin'ny andro: 5 andro
No of Days: Andro 2
₹5,499.00 Atao anaty harona
Tsy misy amin'ny andro: 2 andro